Mayelana Nathi - Goodao Technology Co., Ltd.
I-inflator yamasondo edijithali
I-inflator yamasondo ensimbi
I-Inflator & Vacuums
I-Truck Air Compressor
I-inflator yesondo yesithuthuthu sikagesi
Amathoshi & Izibani
Iphakethe Lokulungisa Amasondo
Amakhithi Okulungisa Amasondo
I-Yuyao Jiaqiao Auto Accessories Co., Ltd. yinkampani egxile ekwenzeni izinhlobo ze-12VDC air compressor yemoto (inflator yesondo lemoto), isicoci semoto, amathuluzi ezimo eziphuthumayo eziseceleni komgwaqo nezinye. Itholakala empumalanga yesifundazwe saseZhejiang - Yuyao. idolobha okuwuhambo lwehora elingu-1 ukusuka esikhumulweni sezindiza i-Ningbo Lishe (Ichweba laseNingbo), kanye namahora angu-2 ukushayela usuka e-Hangzhou noma e-Shanghai. Inkampani ihlanganisa indawo engamamitha-skwele ayi-1500 futhi enabasebenzi abangama-80, imikhiqizo ithunyelwa emhlabeni wonke ngezitifiketi eziningi zokungena kwamanye amazwe njenge-CE, RoHS, njll.
Njengenye yefekthri ehamba phambili nephrofeshinali, esekelwe kunqubomgomo yekhwalithi “yekhwalithi ethambekele, ikhasimende kuqala”, sisungule uhlelo lokulawula ikhwalithi olunembayo nolusebenza kahle kakhulu. Izitifiketi ze-ISO 9001:2000 zohlelo lokuphathwa kwekhwalithi zitholwa ngo-2006.
Ukuthuthukisa izinzuzo eziyinselelo emncintiswaneni wamanani womhlaba wonke kanye nokulawula ikhwalithi kangcono, sisungule ishabhu yethu yokusebenzela yama-Harware, indawo yokusebenzela yezimoto, indawo yokusebenzela yomjovo, indawo yokusebenzela yokuhlanganisa, neshabhu yokubumba yokubumba. Iningi lezingxenye eziyinhloko zemikhiqizo yethu zikhiqizwa embonini yethu, yonke imikhiqizo eqediwe ivela emigqeni yethu yokuhlanganisa.Ngalezi zixhobo zokukhiqiza eziqeqeshiwe kanye neqembu elihle kakhulu le-R & D, ikhono lethu lokukhiqiza lifinyelela ku-50,000 pcs air compressor noma vacuum cleaners njalo ngenyanga. Siphinde sasungula isikhungo sethu sokulawula ikhwalithi, amaqembu okuthuthukisa umkhiqizo.
Ngaleso sikhathi, ukuthuthukisa izinzuzo eziyinselelo emnothweni womhlaba wezinsizakalo ezinhle, ngesisekelo sokuphasa isitifiketi sohlelo lokuphatha lwe-ISO9001, inkampani yamukela i-ERP, i-OA kanye nohlelo lokuphatha ibhizinisi lwe-E. Sizoqhubeka futhi nokwethula ubuchwepheshe obuphambili basekhaya nabangaphandle kanye nolwazi lokuphatha, futhi silwele ukwenza ngcono izinga lomkhiqizo kanye nokuncintisana. Iningi lemikhiqizo yethu inezitifiketi zamazwe ngamazwe manje.
IKHELINo. 1279 Tanjialing West Road, Lanjiang Street, Yuyao, Zhejiang, China